Home » Lahatsoratra farany farany » Ny tombony azo avy amin'ny fisafidianana rafitra faktiora mandeha ho azy
Ao anatin'ny tontolon'ny fiantsenana an-tserasera dia nanjary zava-dehibe kokoa noho ny taloha ny manana rafitra faktiora mirindra sy mandeha ho azy.
Inona avy ireo tombony azo avy amin'ny automatisation ny rafitra faktiora?
Voalohany, tsy azo lavina fa ny automatisation dia hamonjy fotoana be dia be, zavatra sarobidy ho an'ny tompona orinasa.
Izy io dia mandray ny olan'ny olombelona amin'ny fanodinana izay miteraka fihenan'ny vinan'ny lesoka.
Na firy taona ianao na firy taona no tianao ny orinasa kely misy anao, misy zavatra sasany izay tsara kokoa amin'ny lafiny rehetra raha mandeha ho azy izy ireo, ary iray amin'izany ny faktiora.
Fanaovana automatisme rafitra faktiora dia fantatra fa mampihena ny lesoka sy ny vidin'ny asa amin'ny 50%, ary izany dia vola lehibe izay tsy tokony ho sarotra.
Raha mbola tsy fantatrao tsara ny momba azy mpanamboatra faktiora ary mety hahasoa azy ireo amin'ny orinasa rehetra fa indrindra amin'ny orinasa kely, dia tonga amin'ny toerana mety ianao.
Hodinihintsika ato amin'ity lahatsoratra ity ny antony ilanao misafidy rafitra faktiora mandeha ho azy fa tsy boky fampianarana, ary ny fomba rehetra azo ampiharina sy ilaina amin'ny orinasanao.
Mamonjy fotoana be dia be
Tsy azo lavina fa hamonjy fotoana be dia be ianao rehefa mifamadika amin'ny lozisialy faktiora mandeha ho azy. Amin'ny tontolon'ny asa aman-draharaha, ny fotoana itehirizana dia mitovy amin'ny vola voatahiry ihany koa, ary tokony hiezaka ianao handray fanapahan-kevitra hahafahany hitranga.
Raha tsy azonao ny fomba hamonjen'ny rindrambaiko faktiora mandeha ho azy ny volanao dia hanazava izany amin'ny teny tsotra izahay. Rehefa tsy mila mandany fotoana sy ezaka betsaka ny ekipanao amin'ny fitazonana ny lisitry ny faktiora dia miteraka fihenan'ny vidin'ny asa izany. Na afaka mampifantoka ny sainy amin'ny zavatra manan-danja kokoa izy ireo izay hanampy ny orinasanao amin'ny fomba hafa. Mandritra ny fotoana maharitra, izany dia hisy fiatraikany tsara eo amin'ny fehin-kevitrao.
Angamba, iray amin'ireo antony lehibe mahatonga ny fifindrany amin'ny rafitra mandeha ho azy ny fitsitsiana fotoana ary mihatra amin'ny faktiora koa izany.
Mihena ny vintana misy lesoka
Tena maha-olombelona ny manao fahadisoana sy lesoka, fa indraindray ny lesoka kely indrindra dia mety hiafara amin'ny fandaniam-bola be amin'ny orinasa, amin'ny fotoana sy vola.
Miaraka amin'ny rindrambaiko rindrambaiko toa an'i Billdu, azonao atao ny mampihena ny vintana misy lesoka ary manana rafitra tena voarindra ihany koa amin'ny fitandremana ny vola laninao rehetra ary koa ny vola miditra aminao.
Io koa dia akanjo goavambe goavambe toy izany satria mamela anao hitantana ny zava-drehetra miasa amin'ny sehatra iray.
Amin'ny maha-orinasa kely azy dia azo antoka fa ity zavatra ity dia hahazoanao tombony mifanohitra amin'ny fananana sehatra maro ho an'ny zavatra samihafa.
Fahazoana miditra amin'ireo fisehoan-javatra fanaovana tatitra
Miaraka amin'ny rafitra faktiora amin'ny tanana, tsy maintsy mandalo fahasahiranana be ianao hanao tatitra mba hampisehoana amin'ireo mpandray anjara hafa amin'ny orinasanao, na koa raha te-hahita anao fotsiny ianao.
Ireo rindrambaiko faktiora faktiora dia hanana fampiasa fitaterana an-tsoratra izay ahafahanao mamorona tatitra tsara tarehy amin'ny antsipiriany ao anatin'ny segondra roa. Ity dia hanome anao topy maso tsara momba ny fahombiazan'ny orinasa ary ahafahanao manao ho avy pl